ဖုန်းများတွင် Battery (ဘက်ထရီ) သက်တမ်း ကြာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုနည်း – YANGON STYLE
ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Battery (ဘက်ထရီ) ကလည်းတော်တော်အရေးပါလှပါတယ်။ ဖုန်းသုံးသူတော်တော်များ ဖုန်းရဲ့ Battery (ဘက်ထရီ) ပိုင်း အလေးမထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းကိုအားသွင်းနေရင်း ဖုန်းအသုံးပြုလျှင် ဖုန်းကပိုပြီးပူလာပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း Battery (ဘက်ထရီ) 20%အောက်လျော့အထိ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖုန်း Power ပိတ်သွားသည့်အထိ သုံးစွဲခြင်းတို့မှ Battery (ဘက်ထရီ) ရဲ့ သက်တမ်းကိုတိုစေပါတယ်။ iOS ဖြစ်ဖြစ်၊ Android ပဲဖြစ်ဖြစ် Battery (ဘက်ထရီ) ကြာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းပုံခြင်းကတော့ မကွာခြားလှပါဘူး။ အခုရေးသားထားတာကတော့ Apple Official site က အကြံပြုထားတဲ့ Battery (ဘက်ထရီ) ကြာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုနည်းကို ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Battery (ဘက်ထရီ) ကြာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုနည်း
1. 20% – 95% ကြားမှာပဲထားပြီး အသုံးပြုပါ။
2. 100% ကျော်ထိမသွင်းပါနှင့် Capacity ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
3. 20% အောက်သုံးလိုက်လျှင် Deep Discharge State ဖြစ်ပြီး Battery (ဘက်ထရီ) နာပါတယ်။
4. 50% ဝန်းကျင်ထားပြီး အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
5. အပူချိန် 32-95’F လောက်မှာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
6. အားသွင်းနေချိန် ကာဗာဖြုတ်ထားပါ။ (အရမ်းမပူလျှင်တော့ မဖြုတ်ထားလည်းရပါတယ်)
7. လိုင်းမမိတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဖြစ်နိုင်လျှင် Airplane Mode On ထားပေးပါ။
8. အားနည်းနေတဲ့အချိန် Low Power Mode On ထားပေးပါ။
9. မလိုအပ်သည့် Background Activity များကို Location တွေ ပိတ်ပေးပါ။
10. WiFi, Bluetooth Off ထားပြီး Auto Brightness On ထားပေးပါ။
11. Latest Version တင်ထားပါ။
12. ကွန်ပျူတာ နှင့် အားသွင်းခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ပါ။
13. Original Cable သုံးပါ ။ Third-Party ကြိုးတွေသုံးမယ်ဆိုလျှင်တော့ MFi Certified ကိုပဲ အသုံးပြုပေးပါ။
iPhone တွေမှာတော့ Settings > Battery > Battery Health ကိုသွားကြည့်လိုက်လျှင် ဖုန်းရဲ့ Original Battery mAh မှာ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်အထိ ကျန်သေးတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Apple ရဲ့ Recommendation အရဆို 80% အောက်လျော့မှလဲသင့်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။7Plus နဲ့အောက်ပိုင်း Model တွေမှာ Battery Capacity နည်းလာတာနှင့်အမျှ CPU ကိုလုံလောက်တဲ့ Power ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခါမှာ Shut Down ကျကျသွားခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေမှာဆိုလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ Battery (ဘက်ထရီ) လဲဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချက်တွေကတော့ အခုပဲ 100% အားသွင်းထားပြီး အသုံးပြုနေရင်း ချက်ချင်းဆိုသလို အားကျမြန်သွားခြင်း၊ ညက 100% အားအပြည့်သွင်းပြီး အိပ်လိုက်တယ် မနက်ကြတော့ အားကုန်ပြီး ဖုန်းပိတ်သွားခြင်း၊ အားအလွန်လျော့နည်းနေခြင်းမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဆိုလျှင်တော့ Battery (ဘက်ထရီ) ကို လဲလှယ်သင့်နေပါပြီ။ အထက်ပါနည်းတွေအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုလျှင်တော့ ဖုန်း Battery (ဘက်ထရီ) ရဲ့သက်တမ်းက ပိုပြီးကြာရှည်ခံတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Apple အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Battery (ဘက်ထရီ) အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုလျှင်တော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Reference Link လေးကို နှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ဖတ်ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Ref : https://www.apple.com/lae/batteries/maximizing-performance/